Web Hosting for Myanmar — MYSTERY ZILLION
Shwe Hosting is the United Kingdom based web hosting provider for Myanmar (Burma) with unlimted space, unlimited bandwidth, 24x7 Free support and 99.99% uptime guarantee on reliable Linux web servers which are installed Intel Xeon 8 CPUs.
Unlike other web hosting providers, there are no hidden fees and setup fees at Shwe Hosting and we normally provide our best service to customers atareasonable price. We provide FREE Burmese/English Speaking technical support to all of our existing customers as well as new customers in 24 hoursaday and7daysaweek.
L-Starter အတွက်တော့ စျေးကသက်သာပါရဲ့ နောက်ပိုင်း တဖြေးဖြေး စျေးကြီးလာချက်ကဗျာ:2:
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် small business အတွက်တော့ကောင်းပါတယ်
ရွှေ အကြောင်း သိတာကြာပြီ ပိုက်ဆံမရှိလို့ မသုံးနိုင် မ၀ယ်နိုင်တာ... စျေးက သက်သာသလိုလိုပဲနော်..။ သုံးဖူးတဲ့ လူများရှိကြလားဗျာ...။ ရှိရင်လည်း သိပါရစေ...။ ကောင်းမကောင်းဆိုတာ :101:
ကျနော့သဘောဆို မသုံးစေချင်ပါ။ ဘယ်နိုင်ငံ အခြေပဲ စိုက်စိုက်။ ဘန်းကျော်ဖွား ဘန်းကျော်သားများဟာ ဆိုရင်ဖြင့် Privacy ကို ထိန်းသိမ်းချင်ရင် မသုံးကြပါနဲ့လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘန်းကျော်ကို နှိမ်တာမဟုတ်ဘူးနော် ကြုံဖူးတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိနေလို့ပြောတာနော်။ စိတ်ဓတ်တွေ အဆင့်အတန်း မမြင့်ခင်အချိန်အထိ ဘန်းကျော်သားပိုင်ဆိုရင် ကျနော်တော့ ဝေးဝေးရှောင်ပါကြောင်း။ အရသာ ဘယ်လိုနေလဲ သိချင်ရင်တော့ သုံးကြည့်ကြပေါ့။
(လူဆင်းရဲတာ အပြစ်မဟုတ်ပါ စိတ်ဓတ်အောက်တန်းကျချင်းတာ အပြစ်ဖြစ်သည်):14::14::14:
ကျွှန်တော် ကြည့်မိသလောက်တော့ဗျာ..သူဆိုဒ်မှာက right click လဲမပေးဘူး..တစ်မျိုးပဲဗျ
တခြားနာမည်ကြီး webhosting ဆိုဒ်တွေတောင်အဲဒါမျိုးလုပ်တာမတွေ့မိသေးသလိုပဲ.....
ကူးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်... နောက်တစ်ခုက.. copyright ကို 2004-2009 တဲ့တစ်မျိုးပဲ
domain age ကိုစစ်ကြည့်တော့လည်း.. တစ်လတဲ့... သိပ်တော့လည်းနားမလည်ပါဘူး...:P
L starter လေးကမဆိုးဘူး.. unlimited တွေဆိုပြီးကြည့်လိုက်ပါမှ control panel > no